श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन ! बि. स. २०७४ साल पौष २६ गते बुधबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १० तारीख माघकृष्ण पक्ष, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल « Light Nepal
श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन ! बि. स. २०७४ साल पौष २६ गते बुधबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १० तारीख माघकृष्ण पक्ष, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Published On : 10 January, 2018 12:10 am
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल पौष २६ गते बुधबार इश्वी सन २०१८ जनवरी १० तारीख माघकृष्ण पक्ष नवमी तिथी चन्द्रमा तुला राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु – ज्यो . पं . सरोज घिमिरे / लाइटनेपाल डटकम
ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य घाटा आईपर्न सक्छ । पारीबारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ । कार्यसम्पादनमा बिशेष होसियार हुनु पर्ने छ । खानपानको क्षेत्रमा समय राम्रो रहेको छ । पती पत्नि बिच मन मुटाब हुन सक्ला ।
खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरुबाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । प्रतिस्प्रदामा उत्रन तपाईकोे समय ले त्यति साथ दिने छैन ।सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ ।
सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु होला । पारीबारीक साथसहयोगले मन प्रशन्न रहला ।सभासम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मानसम्मान प्राप्तिको सम्भाबना रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ ।
आटँ शाहसमा बृद्यि हुनाले तपाईका बिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । तपाईका रोकिएका कार्यहरु पूृनः सुचारु गर्दा सफलता प्राप्त हुनेछ । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ ।
अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । धनमालमा क्षति पुग्न सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ ।
कार्य कुशलताले गर्दा सबै क्षेत्रमा चर्चा चल्नेछ । बिभिन्न आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्ने छन । कुलकुटुम्बहरुको साथ सहयोले मन प्रशन्न रहला । आकस्मीक धन लाभको योग रहेको छ । हराएका सामान हरु फेला पर्न सक्नेछन ।
सामाजिक कार्यमा बिशेष फाईदा हुनेछ । मान्यजनहरुको साथसहयोले कार्य सहज हुनेछ । बौधिक ब्यक्तित्व हरु सगँको भेटघाट फाईदा मुलक रहनेछ । सामान्य काममा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ । पठनपाठनको निम्ति समय राम्रो रहेको छ ।
अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जस आउन सक्छ । खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य दिगो नरहन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ ।